i-samsung galaxy s6 esebenzayo vs i-samsung galaxy s6
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Samsung Galaxy S6 esebenzayo vs Samsung Galaxy S6
I-Samsung Galaxy S6 esebenzayo vs Samsung Galaxy S6
Ukugqwesa ngumgangatho ophawuleka ukuba i-Samsung iyachuma kuyo yonke imveliso eveliswa yinkampani. Ukuba ngomnye wenkulumbuso kwimizi-mveliso ye-smartphone, uSammy uphume konke kulo nyaka ngokukhutshwa kwefowuni yakhe ephambili, i-Samsung Galaxy S6, eyothusa abaninzi, yaya kwicala elitsha ngokupheleleyo kuyilo lwefowuni. Ukuphalaza igama layo ngaphambili, i-S6 yangqina kubagxeki ukuba i-Samsung inento eyenzayo ukuze ibe ntsha xa kufikwa kuyilo lwefowuni.
Ngelixa uyilo lweprimiyamu ye-S6 luthandwa, ikhupha umgangatho wokumelana namanzi kowandulelayo-nangona, iyinto eyi-rsquo eyaziwayo ebusweni obupheleleyo kunye ne-Samsung Galaxy S6 Active. Nangona iphepha elichazayo leefowuni zombini lifana, uyilo olubonakalayo lwahluke kakhulu. Yiyo leyo, ewe, yile nto yenza isigqibo sokukhetha enye nokuba nzima. Ukuthathela ingqalelo oko, yeyiphi oyakuhamba nayo? Uyilo lweprimiyamu yeGlass S6, okanye ulwakhiwo olungangenekiyo lweS6 esebenzayo?
Njengoko sitsho ngokucacileyo, ulwalathiso olutsha lwe-Samsung kunye ne-rsquo lubonakala ngokucacileyo ngeGalaxy S6 & rsquo; s, uyilo lweprimiyamu. Ngeliphandle, ibila nje kwizinto ezinomtsalane kuwe ngakumbi. Ewe kunjalo, i-S6 ibonakalisa yonke into esiyifunayo kwifowuni ephezulu, ke oko kuthetha ukuba umzimba oqinileyo & i-rsquo; iqulathe isinyithi kunye neglasi- yenziwe yabangcono nangakumbi ngokukhanya okubhabha ngomlingo kwiindawo zayo. Omnye wemicimbi yokuba noyilo lweprimiyamu, nangona kunjalo, kukuba & rsquo; zibuthathaka ngakumbi kwaye zithambekele kumonakalo omkhulu xa i-rsquo; s yehlile.
Ayothusi into yokuba loo nto ayisiyongxaki ngeGalaxy S6 Active, enokuba nemo yoyilo ngokuxhomekeke kulowo uthetha naye, kodwa yona isebenza ngakumbi kwifom. Ukulinganisa umdlalo nge-IP68, i-S6 Active yenziwa ukuba imelane nayo yonke into enokutyiwa bubomi-ke oko kukumelana namanzi, ubungqina bothuli, kunye nokothuka okunganyangekiyo. Umonakalo awukho & rsquo; t kwisigama se-S6 Active, ukubona ukuba eyakhelwe-njenge-tanki eyakhiweyo iqinisekisa ukuba & rsquo; ayinakudlula.
Nangona ezi zinto zimbini ze-IR blasters, ezakhelwe-ngaphakathi ukutshaja ngaphandle kwamacingo, kunye ne-sensor yenqanaba lentliziyo, i-S6 izibonelelo zokufumana ukhuseleko oluphezulu kunye nenkxaso yeentlawulo zeselfowuni ngenxa yomnwe wayo weminwe- ngelixa i-S6 Active inamaqhosha e-Android ebonakalayo kunye nebhetri ephezulu yamandla iseli.
I-Samsung Galaxy S6 iyasebenza
5.78 x 2.89 x 0.34 intshi
I-146.8 x 73.4 x 8.6 mm
I-Samsung Galaxy S6
5.65 x 2.78 x 0.27 intshi
I-143.4 x 70.5 x 6.8 mm
I-4.87 oz (138 g)
Jonga i-Samsung Galaxy S6 esebenzayo ngokuthelekisa ubungakanani beSamsung ye-Samsung S6 okanye thelekisa ezinye iifowuni usebenzisa isixhobo soThelekiso soBungakanani.
Ukutshabalalisa igama elidlulileyo lobuchwephesha be-AMOLED kwixa elidlulileyo, njengokugcwala kakhulu kunye nokuthotywa phantsi kweemeko eziqaqambileyo, iSamsung iphinde yasothusa ngokugqibezela isikrini se-AMOLED- kwaye ezi fowuni zimbini zibonisa ukuba azikho ezinye! Ngapha koko, baphinde babhengeza iscreen esifanayo, isibuko esingu-5.1-intshi 1440 x 2560 Quad-HD Super Super AMOLED.
Ngokubonakalayo, amehlo ethu azisiwe ngezikrini ezityebileyo ngokweenkcukacha, ezinamandla ngokuqaqamba, ezineeengile zokubukela ezibanzi kakhulu, kunye nemibala evelayo. Yinto enye yokwenza izinto ngokubonakalayo ngamehlo ethu, kodwa kukho umahluko phakathi kwezi zinto zimbini- nangona kunjalo, ayisiyonto ingako. Umzekelo, i-S6 kunye ne-S6 Active & rsquo; s imilinganiselo yokukhanya kwimilinganiselo engama-570 nits, eyenza ibonakale nakwimeko eqaqambileyo. Kwaye ayipheli apho!
Ngokukodwa, amaqondo obushushu obushushu bawo awela ngaphakathi kuluhlu olusondele kakhulu kwixabiso elifanelekileyo le-6500 K. Ngaphambili, ii-AMOLED bezisaziwa ngokuvelisa imibala engekho ngqiqweni, egcwaliswe ngaphezulu, kodwa ezi zimbini zibonisa ukuba & rsquo; ayisasebenzi. Ngapha koko, xa & rsquo; seta kwakhona kwi & lsquo; basic & rsquo; imowudi yokubonisa, bavelisa ngokuchanekileyo imibala kwitshathi yombala we-sRGB. Ekuphela kwento eyahlukileyo apha, kwinto esinokuyibona, luhlobo oluthile lonyango olusetyenzisiweyo kwiscreen se-S6 Active & rsquo; esirhola amanzi ngcono.
I-Apple Music eneDolby Atmos: ungamamela njani kwiitayile zomsindo weNdawo?
Umbono we-Apple iPhone 6 uthatha indawo ye-ID yeTouch kunye ne-ID ye-EYE
Abalawuli beNintendo Guqula i-Joy-Con basebenza kunye neefowuni ze-Android kunye neepilisi
Uhlaziyo lweMifanekiso bhanyabhanya yeeFoto zikaGoogle lukhutshwa
I-64GB okanye i-256GB ye-iPhone 8: loluphi ukhetho lokugcina ekufuneka ulukhethile?